XOG:- C/weli Gaas oo maanta ku wajahan dalka Itoobiya iyo kulamo uu la qaadan doono madaxda dalkaas – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- C/weli Gaas oo maanta ku wajahan dalka Itoobiya iyo kulamo uu la qaadan doono madaxda dalkaas
Ilo xog-ogaal ah aynu ka heleyno saraakiil ku sugan xarunta madaxtooyadda Puntland ayaa sheegaya in wafdi uu hogaaminaayo madaxweynaha maamulka Puntland C/weli Maxamed Cali Gaas ay maanta ku wajahan yihiin dalka Itoobiya.
Madaxweyne C/weli Gaas ayaa markii uu gaaro dalka Itoobiya waxa uu kulamo la qaadan doonnaa madaxda dalkaasi, waxaana sida aynu ku helnay xogta ay sheegeysaa inuu madaxdaasi kala hadli doono xiirirka Puntland iyo Itoobiya iyo sidoo kale arrimo la xiriira doorashooyinka ka dhici doono dalka Soomaaliya.
Safarka madaxweyne C/weli Gaas ayaa kusoo beegmaya xilli dhawaantaan madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu safar ku tagay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, halkaasi oo uu kulamo kula qaatay madaxda dalkaas.
Si kastaba ha ahaatee, ma ahan markii ugu horeeysay uu madaxweyne C/weli Gaas safar ku tago dalka Itoobiya, iyadoona safarkaan uu noqonaaya mid kusoo beegmaya xilli dalka Soomaaliya ay ka jiraan xilli kala guur ah, islamarkaana ay doorasho kusoo fool-leedahay, taas oo dhici doono dabayaaqada sanadkaan 2016-ka.
Wixii Xogtaan kusoo kordha dib kala soco Insha Allaah.